Waxaa jiraan qaar kamid ah haweenka oo ay helaan ragga nasiibka leh kaliya. Haweenkaas qiimaha leh waxaa ilaashada ragga waxgaradka ah ee og waxay galaan haweenka noocaas ah.
1. Haweeney si dhab ah u qadariso adiga iyo qoyskaaga.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan guurka waa xiriirka ka dhexeeya hooyada carruurtaada iyo xubnaha qoyskaaga. Haddii gabadha xaaskaaga ah uu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo qoyskaaga, gaar ahaan hooyadaa markaa ma lahan waxaad ka walwasho.
Ixtiraamku waa shay aad muhiim u ah, maahan oo keliya eray ee waa dabeecad, qaab nololeed, hab la macaamil dadka kale.
Waxa ugu muhiimsan waa inuu yahay habka ugu quruxda badan ee jacaylka lagu muujiyo. Haddii aad qof si dhab ah u jeceshahay runtii waa inaad isaga / iyada qiimeyso, waa inaad si weyn u ixtiraamtaa qofkaas, ha noqoto hadalkaaga ama ficilladaada.
Sidaa awgeed, nin ahaan markii ay haweeneydaadu leedahay tayadaan muhiimka ah, weligaa ha u oggolaan inay kaa tagto ama ha iska sii deyn. Sababtoo ah waa dhif in la helo haweeney noocaan ah.
2. Haweeney dhanka diinta ku fiican
Haweeney diinta ku wanaagsan waxay tiir adag u tahay guri kasta. Hadafkaaga koowaad waa inuu noqdaa inaad hesho haweeney ku wanaagsan dhanka diinta.
3. Haweeney jaceyl leh
Aad ayey u adagtahay xilligan in la helo haweeney kalgaceyl leh, oo aan dhib ku qabin in ninkeeda ay kula dhaqanto jaceyl, daryeesha isla markaana mudnaan siiso. Ninyohow haddii aad heshay haweeney leh tilmaamahan naadirka ah waligaa ha iska sii deynin.
Maxay tahay sababta keeneysa inaad banaanka fiiriso, oo aad ceyrsato haween kale, oo mustaqbalka fog kuu horseedi kara dhibaato markaad horeyba u heysatay gabar jaceyl leh oo ku dhinac joogto ??
Haweeney daacad ah oo kugu jecel shaqsiga aad tahay, jaceyl kugula dhaqanto isla markaana ku daryeesho waxay sidoo kale ku dadaali doontaa in dhammaan riyooyinkaaga ay kuu rumoobaan. Sidaa darteed hadaad nasiib u yeelatay inaad hesho gabar noocaan ah soo dhoweyso, waligaana ha qiyaanin.
4. Haweeney hawlkar ah
Haweeney hawlkar ah, waxay jeceshahay inay ku dadaasho inay nafteeda u sameyso wax la taaban karo. Haweeneyda noocaas ah ma ahan caajisleey waxayna ku dadaashaa inay wax ka qabato baahiyaheeda xittaa ha yaraadaan.
Haweeney hawlkar ah, waxay ku dadaashaa inay wax qabsato oo ay sidoo kale caawin karto dadka u dhow. Rag ahaan, hadaad heysato haweeney noocaas ah waligaa ha sii deynin.
5. Haweeney garab ah
Haweeney taageerta oo garab siiso ninkeeda waqtigan la joogo way adagtahay in la helo. Hadana sidaas oo ay tahay waxaa jiraan haweenka qaar oo garanaya culeysyada raggoodu ay marayaan, sidaa darteedna waxay isku daydaa intii karaankeeda ah inay ka caawiso xagga dhaqaalaha haddii ay awoodo, xitaa isagoo aanan weydiisan. Nin ahaan, haddii xaaskaagu dabeecad noocaas ah ay leedahay, nasiib badan ayaad leedahay, waxaad u baahan tahay inaad qaddariso
6. Haweeney aamin ah
Dhibaatada ugu weyn ee ay haweeney kasta ninkeeda u geysan karto ayaa ah inay khiyaameyso. Ragga ayaa si aad ah u neceb qiyaanada, waana mid ka mid ah waxyaabaha aysan waligood cafin.
Haweeney aamin ah, waligeed kuma qiyaameyso xitaa waqtiyada kuugu adag. Waxay jeceshahay inay ku garab istaagto oo ay xittaa ku caawiso intay ku caawi karto, si ay u hesho waddo looga baxo dhibaatada.
Sidaa darteed haddaad heysato qof dumar ah oo sidaas daacad kuugu ah adiga. Dantaada ayay ku jirtaa inaad adkeysato, oo aanad weligaa iska sii deyn.
7. Haweeney aanan lacagta u isticmaalin si bilaash ah
Inaad hesho haweeney si taxadar la’aan ah u isticmaasho dhaqaalaha aad dhibka kusoo shaqeysay oo aanan ka fekerin dhibka aad kasoo martay waa dhibaato weyn.
Haddii aad heysato haweeney aad uga taxadarto dhaqaalaha ama lacagta aad iiso isla markaana u isticmaasho si miisaan leh, markaa waa inaad ilaashataa gabadha noocaas ah.